AmaProteas angcolise irekhodi eshaywa ‘amavukana’ i-Ireland
AmaProteas angene ahlazweni ethelwa othulini ‘amavukana’ i-Ireland ngama-run angu-43 emdlalweni wesibili wosuku olulodwo obuseMalahide Cricket Club ngoLwesibili.
I-Ireland isihamba phambili ngo 1-0 kulolu chungechunge lwemidlalo emithathu yosuku olulodwa. Umdlalo wokuqala waphazanyiswa yimvula.
Elakuleli bekungokokuqala emlandweni liguqiswa yi-Ireland. Emidlalweni emihlanu edlule, amaProteas aziphuzela isobho kodwa izinto zigaye ngomunye umhlathi ngoLwesibili.
Ukaputeni welakuleli, uTemba Bavuma uwine ithosi wabe eseqoka ukushwiba kuqala. I-Ireland idlale ingcwenga yekhilikithi ihlanganisa ama-run angu-290 kuma-over angu-50 kusawe amawikhethi amahlanu.
Ukaputeni we-Ireland u-Andy Balbirnie nguye ubeyiphela endlebeni kumaProteas njengoba eshaye ama-run angu-102 emabholeni angu-117 walekelelwa uHarry Tractor noGeorge Dockrell ababhalise ama-run angu-79 nangu-45 emabholeni angu-68 nangu-23 ngokulandelana.
FUNDA NALA: UNjabulo Blom uthi ukubona usizi lwakwamanye amazwe kubaqinisile beyiqembu
Amawikhethi amaProteas athathwe nguKagiso Rabada, Keshav Maharaj Tabraiz Shamsi no-Andile Phehlukwayo othathe amabili. AmaProteas ahluleke ancama ukujaha isibalo sama-run angu-290 abeshaywe ngosokhaya kwaze kwaba aphuma wonke esenze ama-run angu-247.
URassie Van Der Dussen noJanan Malan bazamile kodwa bangakuthola ukwesekwa. Umdlalo wokugcina uzoba ngoLwesihlanu ngo-11.45am e-Malahide Cricket Club.
Previous Previous post: UBlom usekulungele ukuqhakaza neChiefs kwiChampions League
Next Next post: INingizimu Afrika idlale neZambia seyicabangela eyandulela owamanqamu